Akụkọ - Okpomọkụ na-egbutu ọnọdụ okpomọkụ n’oge ị na-eme akpa
Ekwentị / WhatsApp / WeChat / Telegram:+86 18858875050 Email: fangyongmachine@gmail.com
Extrusion Lamination igwe
Igwe mkpofu ahihia
Igwe na-eme igwe
Obere akpa Ime Machine
Capsa ahụ Cap Ime Machine
Side akara N'aka akara Center akara Machine
Okpomọkụ ọnwụ okpomọkụ akara n'oge akpa Ndinam
N'ime usoro ịme akpa, mgbe ụfọdụ akpa akara adịghị mma. Ngwaahịa mepụtara n'ụzọ dị otu a erughị eru. Gịnị na-akpata ihe ịtụnanya a? Anyị kwesịrị ị paya ntị na okpomọkụ cutter okpomọkụ
Ọ bụ mbubata ịchịkwa cutter okpomọkụ n'oge akpa Ndinam, ma ọ bụrụ na okpomọkụ adịghị adabara, okokụre akpa ga-eru.
Nke mbụ, jide n’aka na ihe anyị ji eme ihe. Otu ihe dị iche iche ọkpụrụkpụ dị iche iche obosara dị iche iche ogologo, ọ chọrọ dị iche iche okpomọkụ. Nwaleenụ ọtụtụ akpa na mmalite nke igwe na-agba ọsọ na-ahụ kwesịrị ekwesị okpomọkụ
Nke abụọ, ihe dị iche iche chọrọ okpomọkụ dị iche iche.
Ọnwụ ọnwụ na-ekpebi akpa akpa, ọ bụrụ na oke okpomọkụ dị elu, ihe ga-agbaze, ihu adịghị larịị na ihe ga-adụkọta, mgbe ahụ ọ ga-abụ akpa mkpofu, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị oke ala, ọ gaghị ebipụ akpa kpamkpam, ọ ga-efe efe akpa nke ọzọ.
Ọzọkwa, mgbe igwe na-agba ọsọ ngwa ngwa, okpomọkụ dịkwa mkpa ịrịgo, mgbe ọsọ na-agbadata, okpomọkụ dịkwa mkpa ịgbadata
Anyị kwesịrị ihicha onye na-ekpo ọkụ ọkụ ugboro ugboro mgbe igwe gachara, mgbe ọ na-agba ọsọ ruo oge ụfọdụ, ọ ga-enwe ụfọdụ ntụ na cutter, ọ bụrụ na anyị ehichaghị ya, ntụ nwere ike ịfefe na akpa ahụ.
Ọzọkwa, anyị kwesịrị ọnọdụ cutter ọnọdụ, mgbe okpomọkụ cutter na-agba ọsọ ruo oge ụfọdụ, anyị ga-eji dochie ya na nke ọhụrụ, mgbe cutter iji ruo oge ụfọdụ, ọ ga-adịchaghị nkọ.
Yabụ ọ bụrụ na anyị nwere ike ijikwa kpo oku ọkụ ọkụ n'ụzọ ziri ezi n'oge ịme akpa, ọ nwere ike ịbawanye ikike mmepụta, belata mkpofu akpa, yabụ anyị nwere ike belata ọnụahịa.
Ala Hengtang River Industrial Area, Yaru Village, Shangwang Street, Ruian City, Zhejiang Province, China
Ekwentị / WhatsApp / WeChat / Telegram:+86 18858875050